Waaxda beeraha dalka Maraykanka oo sheegtay in ay joojinayso xarun bisadaha lagu dilo.. | Baahin Media
Waaxda beeraha dalka Maraykanka oo sheegtay in ay joojinayso xarun bisadaha lagu dilo..
Apr 3, 2019 - jawaab
Waaxda beeraha ee dalka Maraykanka ayaa sheegtay in ay joojinayso xarun bisadaha lagu dilo oo cilmibaaris loo adeegsado, ka dib markii ay bulshadu aad u dhaliishay arrintaas.
Bisadaha waawayn iyo kuwa dhasha ah ayaa la qali jiray si loogu adeegsado cilmibaaris lagu samaynayo caabuq ama fayras inta badan bisadaha ku dhaca oo mararka qaar cuntooyinka lagu arko
Bisadahan ayaa lagu quudiyaa hilib xanuun lagu tallaalay iyo waxyaabo kale si loogu tijaabiyo.
Marka cilmibaarista laga dhamaystana bisadahaas ayaa la dilaa.
Dhakaatiirta xayawaanka ayaa ku dooday in xannuunka bisadaha lagu tallaalo uu yahay mid la dawayn karo, sidaas darteedna loo baahan yahay in la daweeyo oo lagu wareejiyo dad xanaanaysta badalkii la dili lahaa.
In kabadan 3,000 oo bisadood ayaa la dilay tan iyo markii cilmibaaristan la billaabay 1982, WCWP oo u dooda xuquuqda ayaa sheegay in barnaamijka bisadaha lagu laayo ay ku baxdo 22 milyan oo doolar oo ka mid ah canshuurtii shacabka laga soo aruuriyay.
Bishii maarso ayay xildhibaannada Kongareska ee labada xisbi oo midaysan u codeeyeen in meesha laga saaro sharcigaas bisadaha lagu laayo, iyaga oo ugu yeeray “kawaanka bisadaha ee canshuur bixiyeyaasha”.
Jimmy Panetta oo ka mid xisbiga Dimuqraadiga aadna ugu ol’olaynayay in meesha laga saaro sharciga fasaxayay in bisadaha la laayo ayaa markii meesha laga saaray sheegay in arrintan ay muujinayso waxa ka suuragali kara siyaasadda.
Dadkii cilmibaarista samaynayay ayaa sheegay in ay kala bar yareeyeen halista xanuunka toxoplasmosis, kaas oo halis ku ah carruurta uurka ku jirta iyo dadka uu liito habka difaaca jirkooda.